Tekinoroji yekufamba: Huru kuArabia Yekufamba Musika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Tekinoroji yekufamba: Huru kuArabia Yekufamba Musika
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • dzidzo • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Tekinoroji yekufamba yakakura paArabian Travel Market
Mukubatana naAmadeus, Travel Forward Theatre inogamuchira Google, Skyscanner, Travelport, Hilton Hotel, Expedia Group uye nezvimwe kuATM muDubai.
An-mu-munhu mutsara-weakakura mafambiro ekufamba achave achiratidzira mumazuva mashoma kuArabian Travel Market muDubai.
Izvi zviitiko zvemazuva mana zvinotanga ne: Iko Kushanda kweTekinoroji Kugadziridza kune Ichokwadi Chaicho
Mahotera achamiririrawo pachiitiko ichi senzvimbo yekugamuchira vaeni achitaura nezvekuti data nehunyanzvi zvinotsigira sei maratidziro akasarudzika.
Kufamba Mberi, chiitiko chinotungamira chepasirese chetekinoroji yekufamba, chakazivisa mutsara unoshamisa wemazita makuru mazita ekuratidza kurarama pachikuva sechikamu chechiitiko chehanzvadzi Arabhu Rwokufamba Musika (ATM).
ATM yegore rino chiitiko chemasanganiswa. Kufamba Mberi chikamu chemu-mu-chiitiko chinoitika kuDubai World Trade Center kubva 16-19 Chivabvu 2021, inowanikwa pamwe neATM Dubai.
ATM Virtual ichaitika kubva musi wa24-26 Chivabvu uye zvikamu zvese kubva muchiitiko chemunhu zvichawanikwa kuti zvionekwe panguva yechiitiko chaicho.
Mukubatana pamwe neyekufamba tech simba reimba Amadeus, Kufamba Mberi Theater ichagamuchira mutevedzeri wemutungamiri weAmadeus wekutengesa kuMiddle East ne Africa, Jamel Chandoul, ndiani achakurukura kuti kubatana kungabatsira sei kuvaka indasitiri yekufambisa vachishandisa tekinoroji yekupa vafambi ruzivo rwakatsetseka uye rwakachengeteka rwekufamba.
Chikamu ichi chinotarisa zvinonetsa zvevafambi zvinosanganisira mapurogiramu ehutano. Inoitika neMuvhuro 17 Chivabvu kubva 13:30 - 14:30.